MB 2017 Maarso, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Buugga Nexemyaah, oo ka mid ah 66-ka buug ee ku jira Kitaabka Quduuska ah, ayaa u badan tahay midda ugu yar ee la ogaaday. Waxay ka kooban tahay duco qalbi furan iyo heeso la mid ah Sabuurka, ma jiro koonto weyn oo ku saabsan abuuritaanka sida buugga Bilowgii (Bilowgii) iyo taariikh nololeed oo ku saabsan Ciise ama fiqi ahaan Bawlos. Sikastaba ha noqotee, sidii Erayga Eebbe ee waxyiga ah, sidoo kale innaga ayay muhiim inoo tahay. Way fududahay in la iloobo marka la soo ban dhigayo Axdigii Hore, laakiin wax badan ayaan ka baran karnaa buuggan - khaasatan ku saabsan isku xirnaanta runta iyo qaab nololeedka tusaalaha ah.
Buugga Nexemyaah waxaa lagu tiriyaa buugaagta taariikhda sababtoo ah waxay ugu horreyn diiwaan gelisaa dhacdooyinka muhiimka ah ee taariikhda Yuhuudda. Oo ay weheliso buugga Esra, waxay ka warbixineysaa dib-u-soo-celinta magaaladii Yeruusaalem, ee ay ka adkaadeen oo burburiyeen kuwii reer Baabuloon. Buuggu waa mid gaar ah oo loogu qoray qaabkiisa lacagta. Waxaan ka barannaa ereyada Nexemyaah sida ninkan aaminka ah ugu dagaallamay dadkiisa.
Nexemyaah wuxuu fadhiyey meel muhiim ah oo ka mid ah gurigii Artaxshasta, laakiinse wuxuu iska daayay xoog iyo saameyn uu ku caawiyo dadkiisa dhibaatada weyn iyo quudhsashadeeda. Wuxuu helay fasax inuu ku noqdo Yeruusaalem oo dib u dhiso derbigii magaalada burburay. Darbiga magaalada waxaa laga yaabaa inuu umuuqdo mid aan muhiimad u laheyn maanta, laakiin qarnigii 5aad ee BC qalcaddii magaaladu waxay muhiim u ahayd degitaankiisa. Yeruusaalem, oo ahayd xarunta cibaadada ee dadka Ilaah doortay, ayaa la burburiyey oo aan lahayn difaac, Nexemyaah ayaa galay murug aad u weyn. Waxaa lasiiyay habkii uu dib ugu dhisi lahaa magaalada oo uga yeeli lahaa meel dadku ku noolaadaan oo Ilaah ku caabudaan ayagoon baqdin qabin. Dib-u-dhiska Yeruusaalem ma ahayn hawl fudud. Magaalada waxaa ku hareereysan cadaw aan jeclayn xaqiiqda ah in dadka yahuuda ay mar kale ubaxeen. Waxay ku hanjabeen burburin la yaab leh oo ku saabsan dhismayaasha uu hore u dhisay Nexemyaah. Waxay ahayd lama huraan in loo diyaariyo Yuhuudda qatarta.
Nexemyaah ayaa wariyey, oo wuxuu yidhi, Inn badhkeed dadkaygu waxay ka shaqeeyeen dhismihii, laakiinse badhkii kalena waxay hayeen diyaafado gaashaaman, gaashaammo, qaansooyin, iyo taangado, oo waxay taagnaayeen dadkii dalka Yahuudah oo dhan derbiga dhisaya. Oo kuwii wax xambaaray sidan bay yeeleen:
Hal gacan ayay ku qabteen shaqada kalena gacanta ayay ku qabteen qoriga »(Nexemyaah 4,10-11). Waxay ahayd xaalad aad u khatar ah! Si dib loogu dhiso magaaladii uu Ilaah doortay, reer binu Israa'iil waxay ku qasbanaadeen inay u wareegaan dhismayaasha dadka iyo waardiyayaal si ay u difaacaan. Waxay ahayd inay u diyaar garoobaan sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarka waqti kasta.
Waxa jira Masiixiyiin badan oo adduunka oo dhan oo la rumeysan yahay inay halis joogto ah ugu jiraan in la silciyo sababta oo ah qaab nololeedkooda. Xitaa kuwa aan ku noolayn halista maalin kasta wax badan bay ka baran karaan ballanqaadka Nexemis. Waxaa haboon in laga wada hadlo sidii aan “iskudifaaci lahayn” midkeenaba, xitaa haddii duruufaha ay aad uga yaraadaan. Markaan ka shaqeyno inaan dhisno jirka Masiixa, waxaan wajahaynaa adduunka diidmo iyo niyad jab. Masiixiyiin ahaan waa inaan isku hareeraysanaano dadka isku fikirka ah oo aan taageerno.
Nexemyaah iyo dadkiisuba waxay xaqiijiyeen feejignaan iyo diyaar garoow markasta oo loo diyaariyo xaalad kasta - ha ahaato dhisida ama difaacida magaalada dadka Ilaah. Looguma khasbana in la waydiiyo inay qabtaan sababta oo ah waxay kufiicanyihiin hawsha, laakiin waxay ahayd in shaqada la qabto.
Way naga yaryihiin kuwa dareemaya in loogu yeedhay wax qabad weyn. Si ka duwan shakhsiyaadka badan ee Kitaabka Quduuska ah, Nexemyaah si gaar ah looguma magacaabin. Ilaah ugama hadlin duur gubatay ama riyo. Kaliya wuxuu maqlay baahiyaha wuxuuna u duceeyay fahamka sida uu u caawin karo. Ka dib wuxuu codsaday in la siiyo shaqadii dib u dhiska Yeruusaalem - wuuna helay fasax. Wuxuu qaatay dadaalkii uu ugu istaagi lahaa dadka Ilaahay. Sidan, markay xaalad deg-deg ah ku dhacdo deegaankeenna ayaa na ruxaya, Ilaahay wuxuu nagu hagi karaa awood xoog badan sida inuu adeegsanayo tiir daruur ah ama cod samada ka yimid.
Marna ma ogaan karno goorta naloogu yeeri doono inaan shaqeyso. Uma muuqan sidii Nehemia inuu u noqon lahaa musharraxa ugu hambalyada badan: isagu ma ahaa naqshadeeye ama dhisme. Wuxuu qabtay mowqif siyaasadeed oo adag, kaas oo uu uga tanaasulay guul la’aan sababta oo ah damac inuu sidaa sameeyo. Wuxuu u noolaa hawshan maxaa yeelay wuxuu rumeysan yahay in sida ku jirta doonista Ilaah iyo dariiqyada, quruumaha dhexdooda, dadku waa inay ku noolaadaan meel cayiman iyo waqti - Yeruusaalem dhexdeeda. Oo wuu ixtiraamay himiladaan in ka badan nabadgeliyadiisa iyo mudnaantiisa. Nexiya waxay had iyo jeer la kulmi jirtay xaalado cusub. Intii lagu jiray dib-u-dhiska, wuxuu had iyo jeer la loollansan jiray inuu ka adkaado dhibaatooyinka isla markaana uu dib u hago dadkiisa.
Waxaan ka fekeraa sida ay had iyo jeer u egtahay inay adagtahay inaan dhammaanteen u wada adeegno. Waxay igu dhacdaa inaan inta badan ka fikiray in qof aan aniga ahayn uu aad ugufiicnaa inuu caawiyo xaaladaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, kitaabkii Nexemyaah wuxuu ina xusuusinayaa in innagoo ah bulshada Ilaah oo naloogu yeedhay inaan is daryeelno midba midka kale. Waa inaan diyaar u nahay inaan aaminno nafteena iyo hormarkeena cagteena dambe si aan u caawino Masiixiyiinta baahan.
Waxay igu kallifaysaa mahadnaq weyn markaan ka maqlo walaalaha iyo shaqaalaha u shaqeeya dadka kale, ha ahaadee ballanqaad shaqsiyadeed ama tabaruciddooda - inaad bacda si qarsoodi ah ugu dhigto cuntada ama dharka hortiisa albaabka reerka baahan ama martiqaad mid La hadal deriska u baahan casho - dhammaantood waxay u baahan yihiin calaamad jacayl. Waan ku faraxsanahay in jacaylka Eebbe ku shubo dadkiisa iyada oo loo marayo dadkiisa! Ballanqaadkeena baahiyaha deegaankeena waxay muujineysaa qaab nololeed runtii tusaale fiican ah, oo aan ku aamino xaalad kasta oo Eebbe ina saaray meesha saxda ah. Wadooyinkiisa mararka qaar waa wax aan caadi aheyn marka laga hadlayo caawinta dadka kale iyo in iftiin yar loo keeno adduunkeena.
Waad ku mahadsantahay daacadnimadaada aad u muujisay ciise iyo taageerada aad ujeceshahay ee bulshadayada iimaanka leh.
Mahadnaq iyo mahadnaq